Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: यस पटकको तिज महोत्सब तपाईंकालागी अबिस्मरणिय हुने छ अमेरिकामा , August 27, Saturday, 2011 मा तीज महोत्सब, अमेरिकाको मनाससमा ! तपाईं छुट्नुहोला नि !
यस पटकको तिज महोत्सब तपाईंकालागी अबिस्मरणिय हुने छ अमेरिकामा , August 27, Saturday, 2011 मा तीज महोत्सब, अमेरिकाको मनाससमा ! तपाईं छुट्नुहोला नि !
* महिला ग्रुप तीज न्रित्य प्रतियोगिता , * पुरुष ग्रुप तीज न्रित्य प्रतियोगिता
क्यालेन्डर मार्क गर्न नभुल्नुहोला, तपाईं छुट्नुहोला नि !
पोहोर साल २०१० मा यस्तो भएको थियो हाम्रो तीज महोत्सब , तपाईंको सम्झनाकालागी पोहोर सालका फोटोहरु तल हेर्नुस् ! यसपाली हामी यो भन्दा पनि झन बढी भब्य गर्दैछौं तपाईं छुट्नुहोला नि !
अमेरिकामा नेपाली तिज महोत्सब ( Nepali Teej Mahotsab in USA 2010)
कार्यक्रमका फोटो र भिडियो हरु हेर्नूस :